थाहा छ ? किन आउँछ महिला र पुरुषको अनुहारमा कालोपोतो ? यस्तो छ कारण र उपाय – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/थाहा छ ? किन आउँछ महिला र पुरुषको अनुहारमा कालोपोतो ? यस्तो छ कारण र उपाय
काठमाडौँ । धेरैलाई अनुहारको छालामा कालो पोतो आएर हैरान भइरहेको हुन्छ । बिशेष गरेर महिलाहरुलाई गर्भअस्थाको बेलामा अलिबढी अनुहारमा कालो पोतो आउने गर्दछ ।
किन आउँछ अनुहारमा यस्तो खालको समस्या ? यसको समाधान छ रु यसको कारण र समाधानको उपायको विषयमा केही उपायहरुबारे थाहा पाउनुहोस ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हाम्रो छालाको माथिल्लो तहको भित्रपट्टि ९इपिड्रमिसको स्ट्राटम सेल तहमा० मेलानिन सेल बसेको हुन्छ । यो छालाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुने सेल हो । छालाको रङ कालो, गोरो या अरु हुनुमा मेलानिनकै भूमिका रहन्छ ।
१ .छालामा पोतो निम्तिने मुख्य कारण घाम नै हो । घामको अल्ट्राभाइलेट किरण मेलानिनसम्म पुगेपछि मेलानिन अस्थिर बन्न पुग्छ । आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निस्किन्छ र छालामा यस्ता समस्या निम्तिन्छन् । समस्याको ९० प्रतिशत कारण घाम नै हो । १० प्रतिशत अन्य शारीरिक कारणले पनि हुने गर्छ । ४०–५० वर्षको उमेरमा सनस्पोट देखिने समस्या पनि आउँछ । यो उमेरमा आउने सनस्पोट सुरुमा कफी रङको हुँदै पछि कालोमा परिवर्तन हुन्छ । संवेदनशील छालामा बढी समस्या देखिन्छ ।